Inline Atc CNC စက်၊ သစ်သား Atc Cnc စက်၊ စက်ဖြတ်စက် - JCUT
Shandong ပြည်နယ် Jinan တွင်တည်ရှိပြီး Jinan JCUT CNC Equipment Co. , Ltd. (JCUT-CNC) သည်အဆင့်မြင့်သော CNC စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များတွင်အပြည့်အ ၀ အလိုအလျောက်ဖွင့် ချ၍ CNC ဖြတ်စက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်လေး CNC ဖြတ်စက်၊ inline ATC CNN စက် ...
အရည်အသွေးမြင့်မားသောနည်းပညာအသစ်များ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ကောင်းမွန်သော ၀ ယ်ယူပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှု။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးအဆင့်မြင့် CNC ထွင်းထုသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
linear ATC နှင့်အတူ 1325 လေးဗိုင်းလိပ်တံ
စက်ဖော်ပြချက် ၁။ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ slotting၊ လက်သီးဖြင့်ထိုးခြင်း၊ ထွင်းထုခြင်း (ရိုးရှင်းသောပုံစံ) ။ ဖြစ်စဉ်လေးခုသည်ကက်ဘိနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ကက်ဘိနက်တံခါးထွင်းခြင်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အဆင့်မြင့်အလိုအလျှောက်ကိရိယာတန်ဆာပလာပြောင်းလဲခြင်းအစီအစဉ်ကို အသုံးပြု၍ ပရိုဂရမ်သည်လက်စွဲဖြင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိပဲအပြောင်းအလဲအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ဗိုင်းလိပ်တံအမြောက်အများသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်းအလုပ်လုပ်သည်၊ 2. လေဟာနယ်စုပ်ယူနိုင်သောလေဆာစုပ်စက်နှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများစုပ်ယူနိုင်သည်။
1325 CNC သစ်သား CNC
စက်ဖော်ပြချက် ၁။ ကိရိယာ ၁၂ ခုသည်ဖြောင့်တန်းလိုင်းအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲခြင်းမဂ္ဂဇင်းများအတွက်သိုလှောင်ထားသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်ကိရိယာ ၁၂ ခုကိုလွတ်လပ်စွာအစားထိုးနိုင်သည်။ ၂။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင် lamino ဖောက်တံ၏အားသာချက်များကို lamino မမြင်ရသောဆက်သွယ်မှုတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှလုပ်ဆောင်သည်။ lamino မမြင်ရသောဆက်သွယ်မှု၏အားသာချက်များသည် lamino ဖောက်တံကိုကျယ်ပြန့်စွာလူကြိုက်များစေသည်။ အခြားမမြင်ရသောချိတ်ဆက်ပုံစံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ... ၏စုပုံပုံစံ ...
စီးပွားရေးလေးခုဖြစ်စဉ်ကို R4 သစ်သားဖြတ်စက်
စက်ဖော်ပြချက် ၁။ စက်လေးလုံးပါသောအလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ဖွင့်ခြင်းစက်သည်ဖောက်သည်များအားထိရောက်မှုရှိစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဦး ခေါင်းလေးလုံးသည်ဆလင်ဒါများဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားပြီးအလိုအလျောက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်မှဒီဇိုင်းဆွဲထားသည့်ပရိုဂရမ်များစွာကိုအလွယ်တကူဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်။ သစ်သားတံခါးများ၊ ပရိဘောဂများနှင့်စက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်ဖြစ်စဉ်များစွာရှိသောပစ္စည်းများအတွက်သင့်တော်သည်။
ဒီဇိုင်းအသစ် spindle ATC သစ်သား cnc router
စက်၏ဖော်ပြချက် ၁။ စျေးနှုန်းသည်အလွန်နည်းသည်၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားပရိဘောဂစက်ရုံများအတွက်သင့်တော်သည်။ high-end 12-30 တထောင်လေးဖြစ်စဉ်ကို CNC blanking စက်တောင်မှလေ့ကျင့်ခန်းအိတ်နှင့်အတူမော်ဒယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးနှုန်းအတော်လေးနိမ့်သည်။ ၎င်းသည်အတော်အတန်ကြီးမားသောဘဏ္pressureာရေးဖိအားရှိသောပရိဘောဂစက်ရုံများအတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂။ Door panel cabinet အသုံးပြုမှု - ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်လုပ်ငန်းစဉ်လေးခုသည်ရိုးရှင်းသော tool changer model နှင့်ဖြစ်သည်။
1325 disc ကို tool ကို CNC router atc
စက်၏ဖော်ပြချက် ၁။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း - ဗိုင်းလိပ်တံအမျိုးမျိုးကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ထုတ်ကုန်များအမြောက်အများထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အဆင့်မြင့်အလိုအလျောက်ကိရိယာပြောင်းလဲခြင်းအစီအစဉ်၊ လက်ဖြင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိ၊ ပရိုဂရမ်သည်အလိုအလျောက်ကွပ်ကဲသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိပ်တန်းနည်းပညာလေဟာနယ်စုပ်ယူမှုစားပွဲတင်ကို အသုံးပြု၍ ခိုင်မာသည့်စုပ်ယူနိုင်သောစွမ်းရည်ရှိသည့်လေဟာနယ်စုပ်စက်တပ်ဆင်ထားသည်၊ ဇုန် ၄ ခုဒီဇိုင်း၊ အမျိုးမျိုးသောနေရာများတွင်အားပြင်းစွာစုပ်ယူနိုင်ခြင်းသည်အလုပ်၏ထိရောက်မှုကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။ ၂ ။
Atc funiture စက်
စက်ဖော်ပြချက် ၁။ ဤစက်သည် GDZ သို့မဟုတ် HQD အမှတ်တံဆိပ် Air Cooling Spindle ကိုအသုံးပြုသည်။ 9kw မြင့်ပါဝါဗိုင်းလိပ်တံ, ပိုမိုမြင့်မားအပြောင်းအလဲနဲ့ထိရောက်မှု။ အဆင့်မြင့်အော်တိုကိရိယာပြောင်းလဲခြင်းအစီအစဉ်၊ ပိုမိုမြန်ဆန်သောကိရိယာပြောင်းလဲခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်း။ 2. servo မော်တာ၊ တိကျမှန်ကန်သောဂီယာနှင့်တင်သွင်းထားသောထိန်သိမ်းမောင်းနှင်မှုသည်တပ်ဆင်ထားသောကြောင့်ဆူညံသံ၊ အမြန်နှုန်းနှင့်မြင့်မားသောတည်နေရာတိကျမှုတို့ဖြင့်စက်ကိုပုံမှန်လည်ပတ်စေသည်။ ၃။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ဂရုပြုရသောအကြီးစားဂဟေဆော်ခြင်း (ငါးဖက်သုံးကြိတ်ခွဲခြင်းတိကျမှန်ကန်မှု ၀.၀၂ မီလီမီတာ) ။ 4. တပြိုင်နက်တည်းရောင်ခြည်အိပ်ရာ၏စက်လုပ်ငန်းစဉ် ...
linear atc cnc router ကို
စက်၏ဖော်ပြချက် ၁။ တည်ဆောက်ပုံတည်ငြိမ်မှု - သံမဏိကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးကိုအတူတကွဂဟေဆော်ခြင်း၊ တုန်ခါမှု (အပူချိန်) အိုမင်းခြင်းဖြင့်ကုသပြီးရေရှည်အသုံးပြုပြီးနောက်ပုံပျက်ခြင်းမရှိ။ ၂။ ထိုင်ဝမ် Syntec သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောစက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ကောင်းမွန်ပြီးတည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးနှင့်ကောင်းမွန်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ဖြင့်အလွှာစုံ 3D အပြောင်းအလဲ၊ မြန်ဆန်ချောမွေ့သော 3D အပြောင်းအလဲ၊ ထွင်းထုခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ၃။ အီတလီမှတင်သွင်းသောဗိုင်းလိပ်တံကို HSD စွမ်းအားမြင့်လေ - အအေးပေးသောကိရိယာ၊ တိကျမှု၊
သစ်သား router atc
စက်၏ဖော်ပြချက် ၁။ ဓါးအောက်ရှိ switching head လေးခုအားပွတ်တိုက်ခြင်း၊ တူးခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်း၊ ဦး ဆောင်အစွန်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းစသည်တို့ကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်။ ၂။ ထိန်းချုပ်မှုပုံစံဒီဇိုင်းသည်လူသားထုံခြင်း၊ အရူးအမူးခြင်း၊ အော်ပရေတာများသည်ရိုးရှင်းသောလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုပြီးနောက်အလုပ်တွင်ရှိနိုင်သည်။ နည်းပညာလုပ်သားများမလိုအပ်ပါ။ စက်သည်အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာမောင်းနှင်သည်။ ထိရောက်မှုသည်မြင့်မားသည်။ စက်တွင် HQD ပါဝါမြင့်သောလေ - အအေးဗိုင်းလိပ်တံ၊
ထို့အပြင်အသိဉာဏ်ပန်းကန်ပရိဘောဂထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပစ္စည်းကိရိယာများအဖြစ်လူသိများ CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်။ နာမတော်၏အဓိပ္ပာယ်အတိုင်းအတိုင်း, ပန်းကန်၏တင်, ဖြတ်တောက်ခြင်း, ဒေါင်လိုက်အပေါက်တူးခြင်းနှင့် blank မှဖြစ်စဉ်များအားလုံးတစ် ဦး သွားလာရင်းပြီးစီးခဲ့သည်။ ဒါဟာလက်စွဲစာအုပ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့perfectlyုံအစားထိုး။ ဒီတော့ ...
JCUT CNC router စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအသိပညာ
သမားရိုးကျပြproblemနာမှာ - ၁။ တစ်ခါမျှထိန်းသိမ်းထားခြင်းမရှိသောထွင်းထုသည့်စက် - လမ်းညွှန်ရထားလမ်း slider သည်ဖောက်ထွင်းမှုမြန်သည်၊ စက်၏အရှိန်နှေးသည်၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာမကောင်း။ စက်သက်တမ်းမှာဆိုးသည်၊ Z ဝင်ရိုးမှာကပ်နေသည်။ အမှားကြီးနေပြီး၊ ရွေးလိုက်တဲ့ထောင့်ကမကောင်းဘူး။ ဒေါက်တာ ...
R9 series CNC မောင်းနှင်မှုစက် R9 series CNC မောင်းနှင်မှုစက် - စက်နှင့်သက်ဆိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်း - ဖြတ်တောက်ခြင်း slot punch ကိုပရိဘောဂအမျိုးအစားရွေ့လျားခြင်းအတွက်မော်ဒယ်အပြောင်းအလဲလုပ်ရန်အတွက်ကက်ဘိနက်တံခါးပိတ်ထားသောတံခါးပျော့ပျောင်းသောအထုပ်အစစ်အမှန်သစ်သားအတွင်းပိုင်းအစိုင်အခဲသစ်သားပရိဘောဂကွန်ပျူတာ။ R7 စီးရီး CNC ...